မကောင်းတာကိုမှ စွဲလမ်းနေတယ်ဆိုရင် – Live the Dream
လူတွေမှာ စွဲလမ်းမှုတွေ ကိုယ်စီရှိကြပါတယ်။ ကောင်းတဲ့အရာတွေကို စွဲလမ်းတတ်ကြသလို တစ်ချို့ကတော့ မကောင်းတဲ့စွဲလမ်းမှုတွေပေါ့။ ကောင်းတဲ့စွဲလမ်းမှုဆိုတာကို ခြုံငုံပြောရရင် ကိုယ့်ကို မထိခိုက်စေတဲ့အရာတွေပေါ့။ မကောင်းတဲ့စွဲလမ်းမှုတွေထဲမှာတော့ မူးယစ်ဆေးနဲ့ တစ်ခြားသော ကိုယ့်ကိုယ်ဖျက်ဆီးနေတဲ့အရာများအပါဝင် ကိုယ့်ရဲ့ တိုးတက်မှုကိုနှောင့်နှေးစေတဲ့ အပျင်းထူတာ၊ အချိန်ဆွဲတာ၊ အချိန်ဖြုန်းတာ၊ အပျော်အပါးလိုင်းများတာတွေ စတဲ့ အကျင့်ဆိုးလေးတွေကလည်း ကောင်းတဲ့စွဲလမ်းမှုတွေမဟုတ်ကြပါဘူး။
လူတွေက အကျင့်ကို ကျင့်တယ် နောက်တော့ လူတွေကို အကျင့်က ပြန်ကျင့်တယ်လို့ စာအုပ်တစ်အုပ်မှာဖတ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ရဲ့အဆင့်အတန်းနဲ့အရည်အချင်းတွေက သူ့ရဲ့အကျင့်စရိုက်တွေနဲ့တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်တာကြောင့် မကောင်းတဲ့အကျင့်လေးတွေ၊ စွဲလမ်းမှုလေးတွေကိုတော့ ဖျောက်ဖျက်နိုင်အောင်ကြိုးစားရပါမယ်။ ဒီတော့ ကိုယ့်မှာ စွဲကပ်နေတဲ့အကျင့်ဆိုးလေးတွေ၊ စွဲလမ်းမှုတွေကို ဘယ်လိုဖျောက်ဖျက်ကြမလဲ ကြည့်ရအောင်နော်။
ကိုယ့်မှာရှိတဲ့စွဲလမ်းမှုက ဘယ်လိုမျိုးလည်းဆိုတာ ဆန်းစစ်ကြည့်ဖို့က ဦးစွာပထမလုပ်ရမယ့်အရာပါ။ သိသိကြီးနဲ့ စွဲနေတာလား? မသိမသာလေးလား? ခဏတာ စွဲလမ်းမှုလား? သက်တန်းရင့်နေပြီလား? စသည်ဖြင့်အမျိုးအစားလေးတွေကို ပြန်လည်သုံးသပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ စွဲလမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် ဖျောက်ဖျက်ရမယ့်နည်းလမ်းလေးတွေရှာဖွေပါ။ အနာသိရင်ဆေးရှိပါတယ်။ အနားမှာရှိတဲ့ ကိုယ့်ကို ချစ်ခင်တဲ့သူတွေဆီက အကူအညီ၊ အကြံဉာဏ်တွေ၊ တိုင်ပင်မှုတွေလုပ်ပါ။ ဖြတ်တောက်ဖို့ ဘာတွေလိုအပ်လဲ? ဘယ်လိုနည်းလမ်းလေးတွေသုံးသင့်လဲ ဆိုတာတွေကို သေချာစွာလိုက်နာလုပ်ဆောင်ပါ။ ဖြေရှင်းနိုင်မယ့်နည်းလမ်းလေးတွေနဲ့ တစ်ဖြည်းဖြည်း ဖျောက်ဖျက်ရင်း လုံးဝဥဿုံ ပျောက်သွားအောင် ကြိုးစားပါနော်.
အကျင့်ဆိုးတွေကို ဖျောက်ဖျက်ရတဲ့အခါ သူ့ရဲ့ဆန့်ကျင့်ဘက် တန်ပြန်အကျင့်တွေက အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ မင်မင်ရဲ့ စီနီယာတစ်ယောက်က ပြောဖူးတယ် လူတစ်ယောက်ရဲ့ဦးနှောက်က ဆယ့်လေးရက်ဆိုရင်မှတ်မိတယ်တဲ့။ ဒါ့ကြောင့် အိပ်ရာထနောက်ကျမြဲမင်မင်တစ်ယောက် အမြဲတမ်း alarm တွေ ချထား၊ အတူနေတဲ့သူတွေကို အကူအညီတောင်းပြီး မနက် ခြောက်နာရီနိုးတဲ့အကျင့်လေးမွေးမယ်ဆိုပြီး လုပ်တာ… ဆယ့်လေးရက်တောင်မကြာဘူး ခြောက်နာရီဆိုမျက်လုံးကို ပြူးလို့။ လူရဲ့ဦးနှောက်က ပုံမှန်လုပ်သွားမယ်ဆိုရင် ဆယ့်လေးရက်ဆိုရင် တကယ်ပဲမှတ်မိတယ်တဲ့ဗျ။ ဒါ့ကြောင့် တန်ပြန်အကျင့်တွေကို ဆယ့်လေးရက်အတွင်းဆက်တိုက်လုပ်ကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းပါရစေ။
၃။ ဆိုးကျိုးကို လှည့်ကြည့်ရုံ
အကျင့်ဆိုးနဲ့ပတ်သက်ရင် ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုးကျိုးတွေရှိခဲ့ဘူးမှာပေါ့။ တစ်လောက FB ပေါ်မှာ လည်ချောင်းကင်ဆာကြောင့် စကားပြောစက်တပ်ပြောရတဲ့လူကြီးတစ်ယောက်က ဆေးလိပ် အလွန်အကျွံသောက်လို့ ဒီလိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းကို ဝေမျှ ပြောပြနေတဲ့ video လေးတစ်ခုတွေ့မိတယ်။ တကယ်တော့ ကျွန်တော်တို့အသီးသီးစွဲလမ်းနေတဲ့ အကျင့်ဆိုးလေးတေွနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆိုးကျိုးခံစားခဲ့ကြဖူးပါတယ်။ အဆိုးဆုံးအခြေအနေမရောက်သေးလို့သာ နောင်တမရသေးတာ.. နောက်မကျသေးပါဘူးဆိုပြီးဆက်လက် စွဲလမ်းနေသေးတာပါ။ ခံစားရမယ့် ဆိုးကျိုးတွေကိုသာ ပြန်လည်းသုံးသပ်တတ်မယ်ဆိုရင် ဒီအချိန်ကပြောင်းလဲဖို့အစောဆုံးအချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက ဆိုးကျိုးတွေက ပြန်သုံးသပ်ပြီး စိတ်ဓါတ်ကျစရာလည်းမလိုပါဘူး။ အမှားသိမှ အမှန်မြင်တာမို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခွင့်လွှတ်ပေးပြီး ရှေ့ဆက်ပါ။ ဆိုးကျိုးတွေကို လှည့်ကြည့်ဆင်ခြင်ပြီး အကောင်းဘက်ကို ပြောင်းလဲရှေ့ဆက်ပါနော်.
အကျင့်ဆိုးတွေကို ဖျောက်ဖျက်နေတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ဆင့်ချင်းကို သုံးသပ်ပါ။ အရင်က အခြေအနေနဲ့ ဘာများကွာခြားလဲ၊ ဘာများတိုးတက်လည်း Assessment တွေပြုလုပ်ပါ။ အရမ်းကြီးမကွာခြားတောင်မှ တစ်ဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာတဲ့အခြေအနေအပေါ် ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး ရှေ့ဆက်ပိုမို ကြိုးစားလုပ်ဆောင်ဖို့ အားယူပါ။ ဒီလို တိုးတက်မှု သေးသေးလေးက ကိုယ့်ကို motivation ဖြစ်စေမယ့်အရာ၊ ရှေ့ဆက်ဖို့အားအင်ရှိစေမယ့်အရာဖြစ်လို အကျင့်ဆိုးနဲ့ရှင်သန်ခဲ့တဲ့အရင်က အခြေအနေဆိုးတွေ နဲ့ အခုအခြေအနေကို ပြန်လည်နှိုင်းယှဉ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့။
ကိုယ့်ရဲ့အကျင့်ဆိုးအတွက် ထိခိုက်မှာက ကိုယ်ကိုယ်တိုင်အပြင် ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ ကိုယ်နဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရတဲ့သူငယ်ချင်းတွေ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ… နောက် ကိုယ်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ အလုပ်ခွင်တွေလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကိုယ်သာ ပြောင်းလဲရင် အရင်ဆုံးအကျိုးရှိမှာက ကိုယ်ကိုယ်တိုင်.. ကိုယ်ပြီးရင်တော့ အပေါ်က ပြောထားတဲ့ကိုယ်နဲ့ဆက်ဆိုင်သူတွေ၊ ကိုယ်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေပေါ့။ ကိုယ်မှီတင်းနေထိုင်ရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်၊ ကိုယ့်ကို ချစ်တဲ့သူတွေအားလုံးရဲ့ မျက်နှာထောက်ပြီး ပြောင်းလဲဖို့ခေါင်းမာမနေပါနဲ့နော်..
ဆန်းစစ်အဖြေရှာပြီး အမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်ရင် အကျင့်ဆိုးတွေ၊ အကောင်းတဲ့စွဲလမ်းမှုတွေကနေ လွှတ်မြောက်ပါမယ်။ တန်ပြန်အကျင့်တွေကျင့်နိုင်ခဲ့ရင် လွှတ်မြောက်ပါမယ်။ ဆိုးကျိုးတွေကို လှည့်ကြည့်ပြီး စိတ်ပျက်မသွားပဲ အကောင်းဘက် ပြောင်းလဲနိုင်ရင်လွှတ်မြောက်ပါမယ်။ တိုးတက်လာတဲအခြေအနေနဲ့ အရင်က အခြေအနေကို နှိုင်းယှဉ်ပြီး ရှေ့ဆက်ကြိုးစားဖျောက်ဖျက်ရင်လွှတ်မြောက်ပါမယ်။ ကိုယ့်အကျိုးသာမက ကိုယ့်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ လူတွေ၊ ပတ်ဝန်းကျင်တွေ ရဲ့အကျိုးကို နားလည်တတ်ရင် လွှတ်မြောက်ပါမယ်။ နောက်ဆုံးအရေးကြီးတာကတော့ ဘယ်တော့မှ အကျင့်ဆိုးတွေကို ပြန်မကျင့်ပါနဲ့၊ မကောင်းတဲ့စွဲလမ်းမှုတွေကို အစပြန်မဖော်ပါနဲ့ ဒါဆိုရင် လုံးဝ လွှတ်မြောက်ပါပြီ..